Ababhali be-4 bexesha laseGalikhi ekufuneka baziwe | Uncwadi lwangoku
Ababhali be-4 bexesha laseGalikhi ekufuneka bazi
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Inoveli, Inoveli emnyama, Uloyiko
Ndichitha iintsuku ezimbalwa ze zeholide kwiiRías Bajas ze Galicia. Kwaye sele engama-21. Ndiyayithanda yonke into malunga nalo mhlaba kwaye, ewe, noncwadi lwawo ngokunjalo. Ke, nangona zininzi, namhlanje ndijonga kwakhona i-4 ye Ababhali beGalician omele ngakumbi kwaye ophumelele ngakumbi. Bazi UManuel Rivas, uPedro Feijoó, uManel Loureiro noFrancisco Narla.
(IVigo, 1975). UFiijoó waphumelela kwiGalician Philology kwiDyunivesithi yaseSantiago de Compostela. Uzifundisile njengemvumi kwaye unekhondo elinzima njengomvelisi kunye nomqambi. Inoveli yakhe yokuqala, uhlobo olumnyama kunye nokuseta eVigo nakwichweba lasePontevedra, Abantwana bolwandle (Ukuzaliswa kolwandle), waba ngowokugqibela kwi-Xerais Novel Prize ka-2011 kwaye wayeyinto yokubhala eGalicia.
Inoveli yakhe elandelayo ngu Abantwana bomlilo, apho ibuyisa kwakhona abalinganiswa kuleya yangaphambili.
Umbhali kunye negqwetha, umbonisi kwiGalicia Television kunye nombhali wescript. Ngoku usebenzisana kwiDiario de Pontevedra kunye neABC. Uhlala enegalelo rhoqo kwiCadena SER. Incwadana yakhe yokuqala, IsiTyhilelo Z: Ukuqala kwesiphelo, into eyothusayo eyothusayo, yaqala njengebhlog ye-Intanethi eyabhalwa ngumbhali ngexesha lakhe lokuzimela. Ngenxa yempumelelo yayo, yapapashwa ngo-2007 kwaye yaba ngowona mthengisi ubalaseleyo.
Iinoveli zakhe ezilandelayo, Iintsuku ezimnyama y Ingqumbo yamalungisas, ibikukuqhubekeka kweyokuqala. Kodwa impumelelo eqinisekileyo yeza kuye ngo-2013 nge Umgibeli wokugqibela, Inoveli eyoyikisayo ngenqanawa yesiporho eyothusayo njengomlingisi ophambili.
Ngo-2015 wapapasha Ilitha, enye inoveli ene Iimpawu ezimnyama nezothusayo kunye nomlinganiswa ophambili ofumana ingozi engaqhelekanga yezithuthi emshiya equlekile. Emva kweeveki ezimbalwa, nasemva kokuchacha ngokungummangaliso, yonke into itshintshe ngokupheleleyo kwaye umntu sele eqalile ukulandela ikhaya kunye nosapho. Ngapha koko, ushiyeke eneziphumo ezibi zokuba angalawuleki.
Umsebenzi kaLoureiro uguqulelwe ngaphezulu kwe Iilwimi ezilishumi kwaye yapapashwa kumanqaku amazwe.
(La Coruña, 1957). Ligama lembali ende kunye neyona mpumelelo. bucala ngasekhohlo umbhali, imbongi, isincoko kunye nentatheli IsiGalician sibhala amanqaku e-El País. Ukwalilo neqabane elisungula iGreenpeace eSpain kwaye ulilungu leRoyal Galician Academy.
Sayina izihloko ezinjengokudityaniswa kwebali elifutshane Iinkomo ezizigidi (1989), ophumelele imbasa yabaGxeki yeGarrical Narrative. OKANYE Undifuna ntoni, sithandwa? que kubandakanya ibali Ulwimi lwamabhabhathaneUmlawuli uJosé Luis Cuerda wayisa kumdlalo bhanyabhanya. Intambo ikwenze nefilimu engaziwayo ye- Yonke into ithi cwaka, inoveli emnyama emnyama eyapapashwa ngo-2010.
Umsebenzi wakhe wamva nje, ukusukela ngo-2015, ngu Usuku lokugqibela eNewfoundland, Inoveli exelela indlela yaseSpain ukusukela kwixesha lasemva kwemfazwe kunye notshintsho oluqala kwivenkile ethengisa iincwadi eLa Coruña, esongelwa ngokuvalwa.
Elinye igama ngaphezulu kwaziwa. bucala ngasekhohlo umbhali kunye nomphathi wenqwelo moya upapashe iinoveli, amabali, imibongo, izincoko kunye namanqaku. Njengomhlohli, uthathe inxaxheba kwiiforamu ezahlukeneyo, ezinje ngamaziko eyunivesithi kunye neenkqubo zikanomathotholo kunye nomabonakude.
Ubhetyebhetye kakhulu, izinto azithandayo zibandakanya ukupheka, ukuloba iimpukane, ibhonsai kunye nefashoni. Ikwaxhasa iiprojekthi zenkcubeko ezinje intsomi, emiselwe ukubuyisa, ukukhusela nokusasaza isithethe somlingo saseGalicia.
Ngo-2009 wapapasha inoveli yakhe yokuqala, Los iindlovu del rye. Ngo-2010 bekunjalo Ibhokisi mnyama, eyaphinda yakhutshwa ngo-2015. Ngo-2012 yamangaliswa ngo Uqinisekisa, isihloko sembali esoyisa uluntu kunye nabagxeki, njengenye yeencwadi ezithengisa kakhulu. Ukuzonwabisa, ubumnandi, kunye nohambo lweenkedama u-Assur, okhuliswe kwaye wafundiswa phakathi kweenqanawa kunye neeVikings, zezona zifundwe kakuhle ngeli hlobo.
Ngo-2013 wapapasha enye eyimbali, URonin, eyamenza ukuba abengomnye wababhali abanetalente kunye neziphiwo zolu hlobo kwilizwe lethu. Apho iinduli ziyabhomboloza ngumsebenzi wakhe wokugqibela wezembali, eneengcuka ezinkulu nezingaqhelekanga njengomlinganiswa ophambili kwimbali yokuzingela nokuziphindezela ebekwe ngexesha likaJulius Caesar. Ewe ibe yimpumelelo kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Ababhali be-4 bexesha laseGalikhi ekufuneka bazi
Ndifumana nganye inomdla kakhulu.
Ababhali abazalwe ngoJuni. Amanye amabinzana avela kwimisebenzi yakhe.